Samsung Galaxy Note 7 voarara amin'ny sidina amerikana rehetra | Androidsis
Ny fijaliana miadana sy ny fahafatesan'ny Samsung Galaxy Note 7 dia mitohy tsikelikely ary rehefa mandeha ny andro, ny vaovao dia samy mahita ratsy kokoa ho an'ny orinasa Koreana Tatsimo.
Taorian'ny fizarana sy fivarotana ity fitaovana mipoaka ity dia nijanona fanindroany hatramin'ny nanombohany tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ny firenena am-polony, ary koa rehefa nofoanana ny famokarana azy dia nataon'i Samsung «Satria ny fiarovana ny mpanjifa no laharam-pahamehana indrindra», ankehitriny ny Galaxy Note 7 dia voarara amin'ny sidina amerikana rehetra.
1 Ny Galaxy Note 7 dia "fitaovana mampidi-doza voarara"
1.1 Ny vokatry ny fandosirana ny baiko
2 Ny farany azo antoka: fatiantoka ara-toekarena sy fahatokisana
Ny Galaxy Note 7 dia "fitaovana mampidi-doza voarara"
Nanomboka omaly, tsy misy mpampiasa afaka miditra amin'ny sidina rehetra any Etazonia sady mitondra terminal Samsung Galaxy Note 7. Noraràn'ny Departemantan'ny Fitaterana, ny Federal Aviation Administration, ary ny Pipeline sy ny Hazardous Materials Safety Administration ity fitaovana ity.
Con hoy ny fandrarana, ilay fitaovana mahatonga ny aretin'andoha lehibe indrindra, fatiantoka ara-toekarena ary fahatokisana an'i Samsung, dia nantsoina hoe "fitaovana mampidi-doza voarara" mifototra amin'ny fenitry ny federaly mampidi-doza federaly.
Ny olona manana fitaovana Samsung Galaxy Note 7 dia tsy afaka mitondra ilay fitaovana amin'ny olona, ​​na enta-mavesatra entiny, na amin'ny entana entina amin'ny sidina mankany, avy any Etazonia na. Ity fandrarana ity dia misy ny fitaovana Samsung Galaxy Note 7 rehetra.
Manomboka anio sabotsy 15 oktobra amin'ny 0 ora maraina (Ora atsinanana atsinanana) tsy misy Galaxy Note 7 afaka "mitaingina" ny fiaramanidina rehetra any Etazonia, na dia novonoina aza izy io. Tsy misy maodelin'ilay fitaovana voatanisa mety ho entin'ny mpandeha rehetra, na toy ny valizy am-paosy ary tsy azo zahana, araka ny naseho avy amin'ny Departemantan'ny fitaterana amin'ny baiko maika.
"Ekentsika fa ny fandraràn'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka an'habakabaka ireo dia tsy hampaninona ny mpandeha sasany, saingy ny fiarovana ny olona rehetra ao anaty fiaramanidina dia tsy maintsy atao laharam-pahamehana", hoy ny sekreteran'ny fitaterana Anthony Foxx. "Izahay dia mandray ity dingana fanampiny ity, satria tranga iray monja amin'ny fiaramanidina in-flight dia maneho loza mitatao ho an'ny ratra mafy mahazo ny tena ary mampidi-doza ain'olona maro."
Ny vokatry ny fandosirana ny baiko
Ny vokadratsy ho an'izay manandrana misoroka ny fandrarana tsy manan-kery dia lehibe kokoa noho ny fahamatorana. Araka izany, izay rehetra manandrana mampiditra Samsung Galaxy Note 7 amin'ny fiaramanidina dia hahita ny fomba fakana ny terminal, ankoatry ny fiatrehana lamandy. Ratsy kokoa ny vokany raha miditra anaty valizy voamarina. Raha izany dia, ireo mpampiasa dia azo enjehina tamin'ny heloka bevava, ankoatry ny fiatrehana ny lamandy mifanaraka amin'izany.
Ny farany azo antoka: fatiantoka ara-toekarena sy fahatokisana
Ny fandrarana tanteraka amin'ny fampidirana modely amin'ny Samsung Galaxy Note 7 amin'ny sidina any Etazonia dia tonga andro vitsivitsy taorian'ny orinasa Koreana Tatsimo. mampiato maharitra ny famokarana amin'ireo terminal ireo ary angataho ireo orinasam-pifandraisan-davitra sy ireo mpaninjara antsinjarany manerana an'izao tontolo izao hitsahatra amin'ny fivarotana ny Galaxy Note 7 nanomboka teo may ihany koa ny fitaovana fanoloana sasany.
Miara-miasa amin'ireo rafi-pitsipika mifandraika amin'izany izahay mba hamotopotorana ireo tranga voalaza tato ho ato izay misy ny Galaxy Note 7. Satria ny fiarovana ny mpanjifa no laharam-pahamehana indrindra aminay Samsung dia hangataka amin'ny mpandraharaha sy ny mpiara-miasa rehetra manerantany hanakana ny varotra sy ny fanoloana ny Galaxy Note 7 raha mbola eo am-panaovana ny famotorana.
Manolo-tena hatrany izahay hiara-hiasa amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso mifanaraka amin'izany mba handray ny dingana rehetra ilaina hamahana ny raharaha. Ireo mpanjifa miaraka amin'ny Galaxy Note 7 tany am-boalohany na ny fitaovana fanoloana Galaxy Note 7 dia tokony ho faty ary hijanona tsy hampiasa ilay fitaovana ary manararaotra ny loharanom-bola misy.
Raha ny fahitana azy, Samsung dia mbola tsy nahita izay lesoka misy fiatraikany amin'ireo fitaovana vaovao, fa noterena ihany tamin'ny farany avelao ny famokarana Galaxy Note 7, terminal iray izay mety hiteraka, amin'izao fotoana izao, farafahakeliny 2.300 tapitrisa dolara amin'ny fatiantoka ara-toekarena ho an'ny orinasa, ankoatry ny fanimbana be ny endrika am-bahoaka. Raha ny marina, ny fanadihadiana natao vao haingana dia manambara izany 40% n'ny mpampiasa Samsung no misafidy terminal avy amina marika hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung Galaxy Note 7 voarara amin'ny sidina amerikana rehetra